Akụkọ - Gini bu ihe eji eme aru?
Gịnị bụ compostable ihe?
Mbibi nke Compostable bụ njedebe nke mbibi, nhazi nke gburugburu ebe obibi microbial, oge mbibi, ọkọlọtọ na mmetụta na gburugburu ebe obibi. European Union nwere nkọwa maka nke a, nke a kọwara dị ka "ihe compostable". Dabere na EN13432, ihe ndị a na-emepụta compost ga-egosiputa njirimara nke biodegradability, ya bụ, ikike nke ihe ndị na-emepụta ihe iji gbanwee CO2 n'okpuru ọrụ nke microorganisms. Eziri ihe a site na usoro nyocha usoro nyocha: en14046 (gosiputara dị ka iso14855: biodegradability under achịkwa composting ọnọdụ). Iji gosipụta mbibi biodegradability zuru oke, opekata mpe 90% nke larịị biodegradation ga-eru na ihe na-erughị ọnwa isii.
EU nyere iwu banyere ihe ndị na-emebi emebi
Mbibi a tụrụ na ule compost pilot (en14045), ya bụ mpekere na ọnwụ nke ọhụụ (enweghị mmetọ a na-ahụ anya) na compost ikpeazụ. A na-eji ihe mkpofu na-egbu egbu jupụta ihe nlere nke ihe nyocha. A na-atụzi compost ikpeazụ site na sieve 2 mm. Ihe odide fọdụrụ nke ihe nnwale nwere nha> 2mm ga-erughị 10% nke ihe mbụ ahụ.
Usoro usoro ihe compostable
Enweghị mmetụta na-adịghị mma na usoro ịkọpụta ala, nke nyocha ule compost na-enyocha. Obere ala nke ọla di ala (n'okpuru ihe kacha enye) na enweghi mmetụta na-adịghị mma na ịkọchasị ikpeazụ (ntụgharị mbelata ụkpụrụ agronomic na ọnụnọ nke mmetụta ecotoxicological na uto osisi). A na-etinye ule na-eto eto (oecd208 gbanwere) na nyocha ndị ọzọ na physicochemical na compost ebe nbibi nke ule ule mere.
Biodegradable Materials anyị (Wuhu Radar Plastic Company Limited) n'ichepụta ngwaahịa na
Anyị na-ewere PLA na PBAT dịka isi ihe anyị nwere maka ngwaahịa ndị nwere ike ire ere
1, PLA ịrapara kechie, PLA ịgbatị ihe nkiri, PLA mbukota film;
2, PLA akpa (biodegradable nkịta poop akpa, biodegradable ahịhịa akpa), nke bụ PLA + PBAT;
3, PLA ahịhịa, biodegradable PLA na-a Stụ Straw.
Ngwaahịa anyị niile bụ 100% na-ere ọkụ na compostable, nke bụ EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA.
Post oge: Dec-19-2020
Akpa mkpofu Compostable, Eco Cling Kechie Sugar Kechie, Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere, Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere, Kechie Biodgradable Cling Kechie, Akpa Compostable,